ကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် PUSH BLOCK ခလုတ်ဖြင့်စုပ်ယူစနစ်။
၂၆၀°ဆုံလည် adapter သည်လူနာနှင့်သူနာပြုများအတွက်အကောင်းဆုံးသက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုပေးစွမ်းသည်။
တစ်လမ်းတည်းအဆို့ရှင်တပ်ဆင်ထားပြီး 3. ဆည်မြောင်းဆိပ်ကမ်းကိုပုံမှန်ဆားပြွန်ထိထိရောက်ရောက်သန့်ရှင်းရေးကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
ပိုမိုထိရောက်မြန်ဆန်။ အဆင်ပြေသောမူးယစ်ဆေးဖြန့်ဝေရန် 4.MDI ဆိပ်ကမ်း။
ရက်သတ္တပတ်၏စတစ်ကာများနှင့်အတူ 6.Patient တံဆိပ်။
7. မြုံ, တစ် ဦး ချင်းစီအခွံ။
1. Yankauer စုတ်ယူခြင်းပြွန်ကိုများသောအားဖြင့်စုတ်ယူခြင်းဆက်သွယ်မှုပြွန်နှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ရင်ခေါင်းအခေါင်းသို့မဟုတ်ဝမ်းဗိုက်လိုင်ပေါ်တွင်လည်ပတ်စဉ် Aspirator နှင့်ပေါင်းစပ်။ ခန္ဓာကိုယ်အရည်ကိုစုတ်ယူရန်ရည်ရွယ်သည်။
၂။ Yankauer Handle သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမြင်သာစေရန်အတွက်ပွင့်လင်းသောပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
၁။ အသုံးပြုရန်အတွက်သာ၊ ပြန်လည်အသုံးပြုရန်တားမြစ်သည်။
ထုပ်ပိုးခြင်းပျက်စီးသွားလျှင်သို့မဟုတ်ဖွင့်ပါက Ethylene oxide ဖြင့်ပိုးသတ်ဆေးမသုံးပါနှင့်။
အေးဆေးခြောက်သွေ့သောလေ ၀ င်လေထွက်သန့်ရှင်းသောအခြေအနေတွင်သိုလှောင်ပါ။